Last Day!!! Hurry Up... ~ The ICT.com.mm Blog
Last Day!!! Hurry Up…
ရုံးမှာ သို့ အိမ်မှာ Network ချိတ်ဖို့ရှိတယ်ဆိုရင် ICT ရဲ့ 10.10 Super Sale ပရိုမိုရှင်း ရှိတယ်နော်။ Networking ပစ္စည်းမျိုးစုံကို 6% ကနေ 40% အထိတောင် ဈေးလျှော့ပေးထားပါတယ်။ Discount Reward Points ကလည်း နှစ်ဆရဦးမှာမို့ တကယ်တန်တဲ့ ပရိုမိုးရှင်း အစီအစဉ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်သက်ရာ Networking ပစ္စည်းတွေကို ရွေးချယ်ဝယ်ယူဖို့ အောက်ပါလင့်ခ်လေးကို အခုပဲနှိပ်ကြည့်လိုက်တော့နော်။
Shop here: https://www.ict.com.mm/collections/networking-apparatuses
အိုင်စီတီမှာ ဈေးဝယ်ရင် ပစ္စည်းတိုင်းအတွက် အပိုထပ်ဆောင်း % ပေးစရာမလိုဘဲ ဘဏ်စနစ်နဲ့ ပေးချေနိုင်ပါကြောင်း နှင့် ငွေသားနဲ့ပေးချေမယ်ဆိုရင် ၅% Cashback ပြန်အမ်းပေးဦးမှာမို့လို့ အခုပဲ အိုင်စီတီမှာ ဈေးဝယ်လိုက်တော့နော်။
#ShopICT #Myanmar #KBZPay, #WavePay, #CBPay, #KBZ, #AYA and #CB #1010supersale #doublepointdays #lastdayoffer
Newer Earn Double Points Day
Older Double Point Days on 10.10 Super Sale